HP ka a tọhapụrụ a 42-anụ ọhịa multi-aka LCD ngosi
HP ka a tọhapụrụ a 42-anụ ọhịa multi-aka LCD ngosi
42-anụ ọhịa ngosi na matriks LD4200tm pụrụ igosipụta 1080p elu-definition video na-onwem na a Nchikota Iye LEDs na ngwa anya sensọ ịchọpụta akara iwu esịnede abụọ metụrụ, dị ka « tensile » mmegharị ka ibubaa ime.
Nke oke nke a technology, dị ka megide ndị ọzọ ọsọ capacitance,-enye gị ohere ime ka meziri ka ọnụ ala dị ka a matriks bụ chọrọ na mkpokọta ihe ad hoc netwọk nke electrodes eji tụọ nke ihuenyo ahụ metụrụ, niile data a pụrụ inweta site n`ịchọpụta osisi ike nke ahụ merenụ na ihuenyo ìhè.
Isi e ji mara ọhụrụ na ihuenyo bụ otu ihe ahụ dị ka HP ngosi ngosipụta na-enweghị aka ịchịkwa. The ngosi bụ ike nke na-egosipụta 72 percent nke agba gamut nke monitor matriks ka a ikiri n`akuku nke 178 degrees, a na-akpa ike dị iche ruru nke 3000:1, ndị update oge & ndash; 9 MS. nchapụta ngosi a ga-omitted.
Ka izipu ozi banyere mmegharị ịchịkwa monitor ga-ejikọrịrị a PC via a USB n`ọdụ ụgbọ mmiri, na video mgbaàmà pụrụ ibunye via HDMI, VGA ma ọ bụ S-video. LD4200tm dabeere na a ot nlereanya 42-anụ ọhịa HP nyochaa na-enweghị nkwado nke ihe mmetụta technology na ụlọ ọrụ nwere a yiri 47-anụ ọhịa nlereanya, nke nwekwara ike ịbụ okwu ụmụ ndị ka ukwuu ileba anya na a ihuenyo mmetụ.
The nlereanya bụ isi ka ejie ke eferife, dị ka nduzi, ma ọ bụ na-echekwa, ma ga-arụ ọrụ ọ bụla sistemụ, na-aghọta akara via aka.
HP ụlọ ọrụ na-ezube hapụ LD4200tm na ahịa na December 2009 na a price nke $ 2799 - ugboro abụọ ka oké ọnụ ka a yiri ebi ndụ na-enweghị aka interface
M ike abanye na gị ochie peeji nke, mepụta nke ohuru, ga-esi na-ochie
Wee OS X Yosemite 10.10 DP 4 na iTunes 12
Description console MMC | Encyclopedia of Windows
MFP Epson mkpịsị SX 125